I-Synopsis ye-Army Womens Season 3
'Iimpikazi zamaKhosi' Isiqalo 3
Ngamaqhawe amabhinqa ngexesha le-3, uDenise uyaphula, aze abuye kunye noFrank; UClaudia Joy unesifo sikashukela; Roxy ukhulelwa; U-Pamela uyaphula ngeChese; kwaye uJoan uqhutyelwa.
UDenise ufumana ithuba lesibini
UFrank uyatyumza xa efunda into yeDenise aze athathe umsebenzi onobungozi. UDenise uhamba kunye nokukhathazeka. Emva komsebenzi, uFrank uthunyelwa ekhaya ukujongana nemiba yakhe yomtshato kwaye abo babini banquma ukuqhawula umtshato.
Kodwa, uthando lunqoba ekugqibeleni kwaye baqala ukuthandana, babuyele kunye.
UMichael ubonisa ngokucacileyo ukuba uhlaselwe yizenzo zikaDenise, kodwa uyamxolela xa esindisa uClaudia Joy emva kwengozi.
UJeremy Ulwalamano lokufa
UJeremy usetyenziswa. Ngoxa e-Iraq uyagcinwa yinja, ebizwa ngokuba yiLucky kwaye ibuyisela kwakhona kumazwe. Umhlobo omhle kaJeremy ngaphezu kwaloo bulawa nje emva kokuba yena noJeremy batshintshe indawo yokuthumela kwaye uJeremy uziva enetyala. Uya ekhaya, kodwa uxinzelelo lwakhe lukhula xa efumana uLucky, kodwa uyaqonda ukuba intsapho yaseLeBlanc ithathe inja. Uphuma umpu, kwaye njengoDenise noFrank babuya ekhaya ngokuhlwa, bayava ukuqhuma.
UClaudia Joy Unesifo sikashukela
Ngoxa ehamba kunye noDenise kwi-spa, uKlaudia Joy ulahlekelwa ukulawula imoto yakhe. Ulimale kakhulu kwaye uDenise uyamnyamekela ade afike i-paramedics. Esibhedlele baqhuba iimvavanyo kwaye banqume ukuba uClaudia Joy isifo sikashukela.
UClaudia Joy unzima ukulungelelanisa ukutya kwakhe omtsha kunye neenjini, kodwa uninzi lwazo zonke unzima ukungafuni ukuba ubani azi. Uqhubeka nokuphila kwakhe ngokukhawuleza ekunyamekeleni abanye, ade adibane. UDenise umkhuthaza ukuba axelele abahlobo bakhe kwaye ekugqibeleni uyakwenza.
U-Emmalin Ujongene Nokulahlekelwa NguDade wakhe
U-Emmalin unexesha elibi, ngakumbi ngobudlelwane bakhe noyise.
Uza kuhambelana nokulahlekelwa nguodadewabo xa intombazana yase-Iraq iza kuhlala nabo ixesha elifutshane ngelixa lilindele ukuhlinzwa. UHaneen wayelahlekelwe yintsapho yakhe ebhokheni, eveza iimvakalelo zika-Emmalin ngenxa yokulahlekelwa nguodadewabo.
URoxy u Miss Trevor
UTrevor uthatha umsebenzi njengomqashi ukuze ahlale ekhaya iminyaka emithathu ngaphandle kokusetyenziswa. U-Roxy uyavuya kakhulu, ade aqaphele ukuba abazange bambone uTvorvor kuba uxakekile kwaye unxinzelelo olunzulu lokuba aphinde abhalise. UTrvor uxinzezela ukuba abe nosana, kodwa uyamelana. Ekugqibeleni uyavuya malunga nethuba lokuba nomntwana kunye noTrvor.
Iinguqu ezinkulu zeFin
URoxy uya kwintlanganiso yesikolo kuba uFinn usebenza eklasini. Utitshala uyakrokrela ukuba uFinnn udinga uncedo olongezelelweyo, kodwa xa bevavanywa bafumanisa ukuba uphumelele kwaye usebenze eklasini ngenxa yokuba unxungukile. URoxy usebenza ukumngenisa kwisikolo esitsha kwaye uTrvor usebenza ukuhlawula. U-TJ uyaba nomona ngayo yonke into eyenziwa nguFinnn, ngoko u-Trevor uthatha uhambo olukhethekileyo lokuloba.
I-Pamela Kicks ixoshe
U-Pamela uyabamba Ukhohlakele ebuxoki kwaye uyaqonda ukuba unokuthanda ukwenza ezinye izinto ngaphandle kokuxhoma kunye nosapho lwakhe. Uyayiphika kwaye uyazibuza ukuba yintoni enye awayethetha ngayo ngaye.
I-Chase ikwenza kubo ngokuthembisa ikhefu, kodwa ke ibonisa iklasi kwiColorado. Utshela ukuba xa ehamba, abayi kuba khona xa ebuya.
U-Roland uqala uYobhi omtsha kunye noJoan ufumana iSebenzi
U-Roland uthatha umsebenzi njengomlingane we-post-postrapist. UTrevor uyalala, nangona, ngenxa yenkathazo namapolisa. U-Roland wenza konke akwaziyo ukwenza uJoan azive ngcono xa ecaphukile malunga nokusetyenziswa kunye nokulahleka izinto ezibalulekileyo zikaSara Elizabeth Elizabeth.
Emva kwengozi yemoto, xa enyamekela uClaudia Joy, uDenise unquma ukuba ufuna ukuba yi-EMT. UFrank usemva kwakhe kwaye uqala uqeqesho.
UClaudia Joy ulawula isifo sikashukela.
URoxy ukhulelwe, kwaye uFinn uya esikolweni esitsha.
U-Pamela uhamba kunye nabantwana ngaphandle kwendlu kaChase.
URoland uzama ukuqonda oko kwenzekayo kunye nomlingane wakhe, kwaye uJoan wenza iifowuni eziqhelekileyo ukuba zihlaziywe ngo-Sarah Elizabeth.
Indlela yokufumana ithikithi yamahhala kunoma yimuphi ubusuku obusondeleyo okanye umboniso wexesha lomzuzu
"Umncinci Wokuwunqoba" Umdlalo wePing Pong: I-Tilt-A-Cup
Imigaqo yoConformation of Grammar
Izibhengezo eziPhambili zeZibhedlele eziPhezulu zaso sonke ixesha
IsiFundo seFilimu: Zonke izicathulo kwi-Western Front
Imbali Yomsebenzi YeXesha le-19
I-Titanoboa, iNyoka enkulu kunazo zonke emhlabeni
"Ukuba unuku" Iingoma kunye neNguqulelo
I-Central Intercollegiate Athletic Association (CIAA)
I-French Revolution: I-General General kunye ne-Revolution
I-Angel Alcala - i-Biologist Biologist
IQINISWA Igama Igama kunye Nemvelaphi